#OromoProtests, Boycott intact – September 8, 2016 -
#OromoProtests, Boycott intact – September 8, 2016
bilisummaa September 8, 2016	Leave a comment
#OromoProtests-tarkaanfiin amma hooteela walisoo fulduraati fudhatameen koonkolataa loon fee’e jimma irraa gara finfineen geessa jiru irratti qeerroon fudhateen konkolataan isuzu 3 caccabsani konkolaachisaan tokko baay’ee miidhamee jira. itti dabaluun sa”aa wal fakkatatti hootalaa Sira fire jedhamu fulduratti bajajin shani caccabani jiru akkasumaas suqi baay’een caccabani jiru kun kan ta’ee naannoo sa’atti 1:40 gubbatti.
#OtomoProtests-Guyyaa kamisaa sa’a 4:30 irratti Buufata konkolata Amboo irra gara Diirree Incinitti Deema ture Isuzu Lakk Gab 3-27068 kan ta’ee (qabeenyaan isa kan obboo Bekela Fedesa) ta’ee Fee’aatee yeroo Bakka mutuluu jedhamu ga’uu qeerroon naannoo sana dursee waan qopha’ee tureef,otoo bakka ga’uu hin geenyee off eeggannoo dhumaa tiin akka fe’eetti akka deebi’uu ta’ee jira.
Otoo Dangaa Dirree incinnii seenee ture qeerroon aanichaa gutumaan guutuutti gubuuf qophaanii eegaa akka turani beekamee jira. Via Dhábasá W. Gemelal
Wayyanen bombi iddoo gabayaa tii faa darbite wa barbadessite oromoodha shoreerkisota jechuf qophi xumurtetti kanafuu wahunda kessa of egganoo cimaan ha tahuu. Via Oromia Oromo Rennaissance
AMBO MINERAL FACTORY STOP FUNCTIONING!
WARSHAAN BISHAAN AMBOO DALAGAA DHAABE!
Warshaan bishaan Amboo erga gaafa dhalateeti bu’aa hawaasa naannoof buusee kan hin beekneef hawaasni naannoo mufachuun halkan edaa tarkaanfii sirreessaa qeerroon konkolaataa warshichaa irratti fudhatteen warshichi yeroo hin murtoofneef hojii dhaabuu hojjettoota isaaf himee jira. Hojjettoonni warshichaas karaa mirga isaaniif falman dhaban tarkaanfii qeerroo galateeffachuun warshaan kun aaddee #Azeb qallabuu malee uummata magaalaa Amboo fi nu hojjettootaaf bu’aa buuse hin qabuu tarkaanfiin kun konyaawwaan#Oromiyaa lafa konkolaataan warshaa kanaa gahuttis tarkaanfiin jalqabame jabaatee itti fufuu akka qabullee dhaammataniiru.
Qabeenyaa fi albuudonni lafa Oromoo irraa bahan adda durummaan Oromoo fayyaduu qabu malee diina fayyaduu hin qaban jechuun mufii qaban ni guungumu. #qabsoon_itti_fufa Via Walaabu Jiloo
Guyyaa har’a gabaan aanaa Anfilloo magaalaa muggii feshala’ee jira. Bulchiinsa magaalaa sagale guddistuun irra deddeebiin mandara keessa deemanii nagaan bu’eeraa ba’aa daldaladhaa jechaa jiru. Garuu magaalattiin kora bittinneessaa Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaan guutamtee jirti. Namootni cufatniiru. Warreen gabaa keessaa dambi jala dhaabbachaa jirtan lammii keessan isiniif wayyaanee gala. Qeerroonis tooftaa kamiyyuu fayyadamaa milkii keenya nuuf xumuraa nuf jedhin. Via Gamtessa Adem
OromoProtests- Odeessi Qilinxoo irraa argachaa jirru akka mul’isutti, Ob Baqqalaa Garbaa, Yonaatan Tasfaayee, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa fa’aa achuma mana hidhaa Qilinxoo jiru. Namoota wareegaman immoo reeffa isaanii maatii isaaniitti kennaa jiru. Namooti kunneen ammatti adda hin baafamne. Saatii muraasa dura namni tokko ergaa kan nuuf dabarsee jira..
በትንሹ መረጃ ለማካፈል ያህል….
1. በቀለ ገርባ….ቂሊንጦ ያለ
2. ዮናታን ተስፋየ …..ቂሊንጦ
3. ደጀኔ ጣፋ…….ቂሊንጦ
4. አዲሱ ቡላላ…..ቂሊንጦ
5. ጌታቸው ሺፈራው…..ዝዋይ
6. ፍሬው ተክሌ……ዝዋይ
7. አግባው ሰጠኝ…..ሮቢት
8. አንጋው ሰጠኝ……ሮቢት
9. ቴዎድሮስ አስፋው….ቂሊንጦ Via Dhábasá W. Gemelal
#OromoProtests This is Asko bus station, a hub and splinter point at the outskirts of Finfinne for all public transport systems to the Western & North Western parts of Oromia. It’s now deserted, passengers stranded and hence obliged to board on Isuzu & other dry loads heavy trucks.
“girmsh look this is asko bus station nama makina fe’umsatti fe’a jiru” Via Girma Gutema
#OromoProtests Qeerroo Gindabarat kaachisee irraa. Ergamtoonni wayyaanee kanneen akka Yilmaa Qinaaxxii,Abrahaam Taajjabaa,Birruu,zambaabaa Tulluu,Bultoo Meettaa,Asaffaa Dasalenyi,Biraanuu fi namoota maqaa isaanii hin barre gara namoota soddomaa oliitu suuqii uummataa irra deemee saamsaa jira. Gocha keessan kana irraa yoo hin dhaabannee tarkaanfiin madaalawaa akka issin irratti fudhatamu quba qabdaa. Via Daalacha Qaccamaa
An Ethiopian martial arts winner refused to carry Woyaane flag in Korean
ጀግና #ተገኝ #ካሳ በደቡብ ኮርያ በተካሄደው የዓለም የማርሻል አርት የስፖርት ውድድር ላይ አንደኛ በመውጣት የወርቅ ተሸላሚ ሲሆን ባለኮኮቡ ሰንደቃላማም እንዳይሰቀል በማድረግ የኢትዮጵያን ብሔራዊ መዝሙር ብቻ አሰምቶ በዓገራችን ያለውን ግፍ በመግለፅ ለህዝብ ተቃውሞውን አሳይቷል ፡፡
#ኢትዮጵያዊነት ይለምልም !!!
Just like Feyisa Lelisa crossed his hands at the finish line of the Rio Olympics, Ethiopian martial art is #Kassa_Tegegn_Yimer‘ declined to have his country’s flag hoisted here in Cheongju despite his winning gold.
Ethiopian athletes have taken to protesting their government’s crackdown in the Oromia region that has left more than 400 people dead. When it came to the medal ceremony in Cheongju, South Korea, Yimer requested that his country’s anthem be sang but without the flag.
Previous Ethiopia fire kills 23 at prison ‘holding Oromo protesters’
Next Oromia’s moment of truth: The Great Oromo generation and the Oromia Flag